Arsene Wenger Oo Taageeray In 2dii Sano Mar La Qabto Koobka Adduunka – Garsoore Sports
Arsene Wenger Oo…
Arsene Wenger Oo Taageeray In 2dii Sano Mar La Qabto Koobka Adduunka
Tababarihii hore ee Arsenal ayaa sheegay in loo baahan yahay tayo marka la abaabulayo jadwalka ciyaaraha caalamiga ah.
Arsene Wenger ayaa taageeray qorshayaasha lagu qabanayo Koobka Adduunka labadii sanoba mar taasoo qeyb ka ah dib u habeyn lagu sameeynayo jadwalka ciyaaraha caalamiga ah.
Hay’adda maamusha kubbada-cagta adduunka ee FIFA ayaa hadda wadda daraasad ku saabsan suurtagalnimada in tartamada ragga iyo dumarka laga dhigo dhacdo sannadkiiba mar la qabto halkii afartii sannaba mar la qaban lahaa.
Wenger ayaa rumeysan inay suurtogal tahay in Koobab badan oo Adduunka lagu jaangooyo jadwalka iyadoo la dhimayo xaddiga kulamada isreebreebka iyo fasaxyada caalamiga inta lagu jiro xilli ciyaareedka.
Tababarihii hore ee Arsenal ayaa haatan ah madaxa FIFA ee horumarinta kubbada cagta adduunka iyo dib u habeynta kubbada cagta caalamiga iyadoo bilihii lasoo dhaafay ajandahiisa aad u sareeyay.
Tababaraha Faransiiska ayaa rumeysan in nidaamka hadda jira ee gaagaaban ee caalamiga ah ee qeybo kamid ah xilli ciyaareedka oo dhan fasax heer caalami ah la siinayo cayaartooyda uusan ku habooneyn ciyaarta casriga ah maadaama ay culeys weyn saareyso ciyaartoyda isla markaana ay carqaladeyn karto ololaha kooxaha.
Wuxuu u sheegay Kicker: ” Waxaan marweliba dareensanaa in fasaxyada gaagaaban aanay cayaartooyda faa’ido u ahayn. Kuwaasi waxay marweliba yihiin xaaladda hubanti la’aan ah. siddeey cayaartooyda dareemayaan maskaxiyan kulamada caalamiga ah kaddib? Adigoo dhaawacan miyaad soo laabtaa?”
Wenger ayaa sii raaciyay ” Tani waa waxa dhab ahaantii ku dhacay Robert Lewandowski, kaasoo dhaawacmay kulan uu xulkiisa Poland la lahaa Andorra. waxayna carqaladeeysay gebi ahaan xilli-cayaareedkii Champions League-ga ee kooxda Bayern Munich.”
Taa bedelkeeda, Wenger wuxuu yiri waa inay jirtaa hal bil oo nasasho caalami ah. bisha Oktoobar, si xulalka ay u ciyaaraan ololahooda isreebreebka oo dhan.
Taasi waxay arki doontaa tirada maalmaha loo qoondeeyay fasaxyada caalamiga oo in laga dhigo 28 iyadoo haatan ah 50, sidoo kale tirada kulamada isreebreebka ee tartamada caalamina waxay hoos uga dhici doonaan 10 ilaa 7.
“Waxaan dooneynaa inaan yareyno tirada kulamada, taasi waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxaan arki karnaa xaaladda ciyaartoyda”.
Ugu dambeyn Wenger oo ka hadlaya marka isbeddelada la sameeynayo ayaa yiri : ”
“Tartamada sidooda ayay sii ahaan doonaan ilaa 2024ka, isbeddeladana waxaa keliya la sameeynayaa markaa kaddib.”
“kulamo badan oo bugbax ah, kulamo yar oo isreebreeb ah. Taasi waa waxa taageerayaashu ay rabaan”
Pulisic Oo Halis Weyn Galay Kaddib Markii Uu Badda Ku Dhexdhacay (Muuqaal)
Guendouzi Oo Sheegay Inuu Ka Tegayo Arsenal Iyo Kooxda Uu Ku Biirayo